IPodcast inokurekhodwa kwisitudiyo esabelwe iWWDC 2017 | Ndisuka mac
IiPodcasts zinokurekhodwa kwisitudiyo esabelwe iWWDC 2017
Ngeentsuku ezi-5 kuphela ukuya kuthi ga kumhla omkhulu, iApple ihlaziye nje isicelo sayo seWWDC, uyilo oluhlaziyiweyo kunye nokusebenza okutsha, Phakathi kwazo kukho izixhobo ezitsha zabo bazimase umsitho kwiveki ezayo.
Kupapasho lonyaka lweNkomfa yabaPhuhlisi, I-Apple izakuvumela abadali bePodcast ukuqala ngoLwesibini olandelayo ukurekhoda ixesha elininzi lemizuzu engama-60 kwisifundo esenziwe ngaphakathi IZiko leNgqungquthela laseMcEnery.
Njengento entsha ngokupheleleyo, I-Apple iyakuvumela phakathi evekini ukuba umsitho uqhubeka (kude kube nguJuni 9 olandelayo) ukuba abenzi beepodcasters abavela kwihlabathi liphela abazimase umsitho, ekubekweni kwendawo, banokurekhoda iziqendu zabo kwindawo yeWWDC. Le studio, eyilelwe ngokukodwa iimfuno zabenzi beepodcast kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo, iya kuvumela ukwenziwa komxholo womsindo kunye neindwendwe ezine ukuya kwinkqubo nganye.
Ngeli xesha izakubakhona okokuqala iApple ivumela ukusetyenziswa kwenxalenye yezixhobo zayo ukwenza umxholo kumsitho wolu hlobo. Mhlawumbi kungenxa yokuba baqala ukuqonda ukubaluleka kolu hlobo lweemfuno, ezisetyenziswa zizigidi zabasebenzisi bokugqibela kwihlabathi liphela.
Amakhwenkwe asekwe eCupertino bonelela ngekopi yeseshoni (engekho ngaphezulu kwemizuzu engama-60) kubaqulunqi ukuze bayisasaze ngokulula, Ngale ndlela sinika inkxaso enkulu eluntwini.
Ukugcinwa kufuneka kwenziwe kwangolo suku ufuna ukusebenzisa ngalo izixhobo, ukuqala nge-7 kusasa, ke kuya kufuneka uvuke kwangoko ukuze ube nokufikelela kufundo olwenzelwe le njongo. Isihlwele sabantu abaziphetheyo abazimase umsitho kunye neentsuku emva koko kulindeleke ukuba bafune ukusebenzisa izibonelelo. Ngaphandle kwamathandabuzo inyathelo elikhulu ngu-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IiPodcasts zinokurekhodwa kwisitudiyo esabelwe iWWDC 2017
Amanani ama-5 amaMac Model aSebenzayo aVuzayo esiBonayo kwiWWDC kunye neMimangaliso engakumbi
Iifoto ezithandekayo ngezi zicelo zintathu zinikezelwayo